Home Wararka Qorshihii Farmaajo ee Jubbaland oo la soo afjaray iyo ciidankii Itoobiya oo...
Qorshihii Farmaajo ee Jubbaland oo la soo afjaray iyo ciidankii Itoobiya oo loo weeciyay Koonfur Galbeed (Warbixin Xassaasi ah)
Labadii bilood ee la soo dhaafay waxa ka socday degaanada hoos yimaada Dowlad Goboleedka Jubbaland tartan u dhaxeeya Dowladaha Itoobiya iyo Kenya. Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ku wargaliyay cidanka Itoobiya ee ka jooga Soomaaliya in ay u dhaqaaqaan dhanka Jubbada Dhexe si ay halkaas uga xureeyaan kooxda Al Shabaab.
Codsiga Farmaajo ayaa ah mid ujeedooyin gaar ah laga lahaa. ujeedooyinka laga lahaana waxaa ka mida;
In ciidan tiro badan oo Itoobiyaan ah la geeyo degaanka Jubbaland iyaga oo halkaas ku tagaya magaca xureynta Jubbaland laakiin ujeedadu rasmiga ah ee laga leeyahay tahay in ay halkaas ka sameeystaan degaan rasmi ah. Farmaajo ayaa qorshahiisu ahaa in ay ciidankaas loo isticmaalo in lagu bixiyo Madaxweyne Axmad Madoobe. Waxa la qorsheeyay in ciidankaas loo isticmaalo qaabkii cadaadiska loogu saaray Sharif Xassan oo kale taas oo keentay in uu xilka iska casilo. Tani ayaa fursad u siin lahayd MW Farmaajo in uu cidii uu doono u magacaabo degaanka Jubbaland isaga oo isticmaalaya awooda ciidanka Itoobiya.
In ciidanka Itoobiya ay ololaha ka dhanka ah Al Shabab ka bilaabaan degaanka Jubbada Dhexe laakiin qasadkooda ugu danbeeya uu yahay in ay qabtaan magaalada Baraawe iyo nawaaxigeeda. Farmaajo ayaa horay ugu soo saxiixay dowlada Itoobiya in ay la wareegto Dekada Baraawe.
Madaxweyne Axmad Madoobe oo ah nin ku fiican farsamada dagaalka isla markaana qaba la taliyayaal aad ugu dhuun daloola xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya ku sugan tahay xiligaan ayaa waxa ay kula taliyeen MW Axmad Maboobe in isaga oo kaalmeysanaya Ciidamada Kenya uu bilaabo dagaal ka dhan ah kooxda Al Shabaab ee heysata deeganada Jubbaland gaar ahaan deeganada Jubbada Dhexe. Talabadan waxa ay keenaysaa in dowlada Itoobiya dib u gurato. Sidoo kale talabadaan ayaa waxa ay siinaysaa Axmed Madoobe fursad uu isagu ku hogaamiyo ajandaha laga leeyahay dib u xureeynta Deegaanada hoos yimaada Jubbaland.
Hadaba Madaxweyne Axmad Madoobe oo ka anbaqaadayo qorshaah ayaa afartii asbuuc ee u danbeeysay waxa uu ku guuleeystay in uu dagaal ku qaado degaano ka tirsan Jubbaland.
Ciidanka Jubbaland oo kaalmeysanaya ciidanka Kenya ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay dib u qabsadaan dhowr magaalo oo ay horay u haysteen kooxaha nabad diidka ah ee Al Shabaab.
Dhanka kale MW Axmad Madoobe oo doonayo in uu hanto qalbiga shacabka Jubbaland ayaa waxa uu wadaa wadatashiyo uu ku tagayo dhowr magaalo oo ka tirsan degaanka Jubbaland oo ay ku jiraan degmooyinka Afmadow, Dhoobley iyo deegaano kale. Shacabka ku dhaqan degaanadaas ayuu uga warbixyay qorshaha maamulka Jubbland ee dib u xurenyta dhulka kooxda Al Shabaab heysato.
Talabadaan qorsheeysan ee uu qaaday MW Axmad Madoobe ayaa waxa ay albaabada ka soo xirtay qorshihii dhiilada watay oo uu Farmaajo la damacsanaa shacabka reer Jubbaland.
Dowlada Kenya oo og dhibaatada uga imaan karta hogaan ka amar qaato Farmaajo oo loo dhiibo Jubbland ayaa taageero buuxda ku siiyay Mudane Axmad Madoobe qorshahiisa uu ku xaqiijinayo in aan marna Jubbaland la hoos keenin Farmaajo ama uu Jubbaland ku yeesho saameyn siyaasadeed ee fog.
Jermay Dous oo ah xeel dheere ku taqasusay Amniga Geeska Africa aya yiri “Itoobiyada cusub ma aha mid danaynaysa istaratiijo dheer oo ay saameyn ku yeelayto Jubbaland, waxa kaliya ee ay doonayaan waa in ay badbaadiyaan Farmaajo iyo dowladiisa, sidaas darteed Madaxweyne Axmad Madoobe waxa uu go’aansaday in uu kordhiya wada shaqayntiisa dowlada Kenya oo aad ugu qanacsan hogankiisa iyo xiriirka uu la leeyahay maamulada Goboladda Kenya ee dariska la ah Jubbaland”.
Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ku qasaaray dhamaan qorshooyinkiisi uu doonayay in uu kula wareego degaanka Jubbaland, waxaana ugu danbeeyay qorshiii ahaa in uu isku diro beelaha Ogaadeen ka dib markii uu Muqadishu ku caasuumay gudoomiyaha Gobolka Gaarisa Ali Buunow iyo Sanator Yusuf Xaaji. Laba mas’uul ayaa markii ay arkeen qorshaha qariban ee Farmaajo ku gacan seeyray in ay la shaqeeyaan.